अवलोकन noutbka एसस M50V। वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
पछिल्लो केही वर्ष, कम्पनी एसस 15 र 17 इन्च क्षेत्र मा वृद्धि केन्द्रित भएको छ, र बजार यसको Eee पीसी 701 मा शुरू ब्रान्ड पछि, यस्तो एसर, MSI र फ़ुजीत्सु धेरै महत प्रतिद्वन्द्वी गम्भीर सूर्य आफ्नो "स्थान बारे चिन्ता गर्न थाले "। कम्पनी, पुरानो मोडेल को क्षमताहरु अद्यावधिक नयाँ सुधार र तेजी देखि विश्वसनीय र सस्तो प्रविधी छुटेका गर्ने साधारण प्रयोगकर्ताहरूको हृदयमा जित्न जारी।
ल्यापटप - यो समीक्षा को नायक एसस M50V। खातामा विशेषज्ञहरु र साधारण प्रयोगकर्ता समीक्षा को राय लिएर, मोडेल र आफ्नो कमीकमजोरी को प्रमुख लाभ को सबै विचार गर्नुहोस्।
डिजाइन र नयाँ मोडेल को उपस्थिति अघिल्लो रेखा देखि परिवर्तन भएको छैन। M50S र M70S - M50V यसको predecessors धेरै समान छ। "एसस" चयन गरिएको शैली ल्यापटप जलसेक ( "इंजेक्शन"), खैर, त्यो लाईक गर्नुपर्छ यति धेरै कल, र। अघिल्लो एस-लाइन जस्तै, एक नयाँ मोडेल कालो र चमकदार सतह संग खैरो टन गठन गरिएको छ।
अपेक्षाकृत toppings, सबै कुरा सरल छ: कोर2जोडी T9400 2.5 GHz + GeForce 9650M 1024MB + राम को 4GB र HDD 320 जीबी। तल थप विवरण विनिर्देशों छलफल। प्याकेज, devaysa भाग को अलग रोचक छ, तर एक सानो माउस, र एकदम सही कट झोला, कि छ, तपाईं गतिशीलता खरिदको पहिलो क्षण देखि प्राप्त।
एक मोडेल स्टाइलिस्ट जलसेक characterizes कि सबै चमकदार प्लास्टिक को सम्मिलन, विभिन्न स्ट्रिप्स कम्पनी को लोगो संग लाइन क्रोम, छ,: सतह को एसस M50V, समाप्त अन्तिम एस-लाइन को कि जस्तै स्तरमा।
एक धेरै उच्च स्तरमा आत्म गठन गुणस्तर, र उपकरणको रंग योजना र डिजाइन संग मिलेर धेरै ठोस नजर बन्नेछ। ल्याप्टप को सतह र चमकदार स्टाइलिस्ट बनेको छ तापनि, यो उच्च गुणस्तरीय प्लास्टिक धन्यवाद दिन आवश्यक छ लागि, आफ्नो औंलाहरु छोड्न गाह्रो हुन्छ।
साथै, एसस M50V लाभ को खजाना मा शरीर को बल, यो प्लास्टिक बनेको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद समावेश गर्नुहोस्। उपकरणमा थिच्दा कुनै पनि कमजोरी वा गम्भीर संरचनात्मक परिवर्तन देख्यो थिए। पहिचान सानो विरूपण तिनीहरूले सबै खातामा छैन लाग्न सक्छ भनेर थोरै छ। सञ्चालन समयमा, तपाईंले यस्तो creaking वा crunching अन्य ध्वनि सुन्न सक्दैन।
सारा शरीर को बल को समग्र प्रदर्शन गर्न साना nedotyagivaet कि कभर उपकरण - मात्र कुरा प्रयोगकर्ताहरूले विधानसभा एक दोष रूपमा नोटिस। कवर को केन्द्रीय भाग मा थिचिएको गर्दा विक्षेपन सतह महसुस गर्न सकिन्छ, तर सबै प्लास्टिक बाडों एक चोट, त्यसैले विशेष एसस M50V अर्थमा बनाउन गर्दैन दोष। खोल्ने वा अगाडि कुनै squeaks बन्द गर्दा, फैलिएको वा अन्य यस्तै कमजोरीहरू अवलोकन थियो।
बायाँ र दायाँ छेउमा devaysa मा ट्याबहरू, खुला अवस्थामा सम्पूर्ण संरचना को स्थिरता लागि जिम्मेवार। तिनीहरूले सञ्चालन समयमा कम्पन समाप्त हो र स्थान मा ल्यापटप पकड गर्न पर्याप्त छन्। ढक्कन मा लक बिना पछिल्लो लाइन व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो बेला एसस M50V, डिजाइन सुविधाहरू सम्भव बिना गर्न बनाउन - प्रदर्शन खुल्छ र पूर्ण बन्द गर्छ।
चार YUSB पोर्ट, एक firewire कनेक्टर, eSATA बंदरगाहों र HDMI, साथै मानक एनालग VGA उत्पादन बाह्य स्क्रीन जडान लागि: यन्त्र 15 इन्च ग्याजेट इन्टरफेस लागि आवश्यक सबै संग सुसज्जित छ। सबै बन्दरगाह सही ढंगले ल्यापटप को परिधि मा अवस्थित छन् र उपकरण हस्तक्षेप छैन।
स्क्रिनको माथि निर्मित माइक्रोफोन संग 1.3 मेगापिक्सेलको एक वेब क्यामेरा छ। क्यामेरा को ठाडो अक्ष, "स्काइप मा" मा सम्मेलन प्रशंसक कदर हुनेछ जो मा 180 डिग्री मा अवस्थित गर्न सकिन्छ।
प्रदान Realtek RTL8168C र इंटेल एडप्टर (आर) वाइफाइ लिंक 5100 AGN वायरलेस जडान तार इन्टरनेट मोड्युल रूपमा।
एउटै मानक आकार कुञ्जीहरू, त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्न छैन - 15 इन्च आकार बावजुद, यन्त्र थप संख्यात्मक ब्लक र मुख्य किबोर्ड एसस M50V अपरिवर्तित बाँकी छ सुसज्जित छ। रूप अधिभार कारण क्षतिग्रस्त एक बिट छ, तर तपाईं तुरुन्तै दृश्य संकट प्रयोग गर्न सक्छन्।
एक सानो "हल्ला", साथै अघिल्लो शासक नयाँ मोडेल को किबोर्ड, धेरै फ्लेक्स, विशेष गरी यो केन्द्रीय भाग मा लाग्यो। प्रक्रिया, तपाईंले फरक ध्वनि सुन्न सक्नुहुन्छ: सामान्य क्लिक बाहेक, खोक्रो ध्वनि जो ठाउँमा कुञ्जीहरू को फिर्ती, तपाईं सक्रिय टाइप गर्दा विशेष गरी सजिलै देखिने समयमा हुन्छ, सुनेका छ।
Klikpad मुख्य एकाइ अन्तर्गत स्थित र शरीर नै भन्दा किबोर्ड आदर केन्द्रित। सञ्चालन समयमा, बाहेकलाई, कि manipulator बरु गहिरो शरीर मा, एक औंला प्रयोग मुनाहरू रोकन sunk। मोडेल को यो सुविधा, समीक्षा गरेर न्याय, हामी धेरै प्रयोगकर्ताहरू अपिल गर्ने थियो।
सतह klikpada र स्लाइड अधिकतम स्पर्श गर्न सुखद छ। मानक मोड साथै, manipulator जब तपाईं लेखिएको «मोड» क्लिक जो मल्टिमिडिया कार्यक्षमता काम गर्न धेरै सुविधाजनक छ, केही वर्ण हाइलाइट छन् समारोह दोहोरो मोड, अर्थात् संग endowed छ।
सञ्चालन मोड द्रुत विच्छेदन र एम। एन हट कुञ्जीहरू संग analogy द्वारा सुसज्जित अघिल्लो लाइन संग एक ल्यापटप devaysa चयन गर्न।
एसस M50V प्रदर्शन
प्रदर्शन को प्राविधिक विशेषताहरु अघिल्लो एस-लाइन भन्दा अलिकति राम्रो प्रदर्शन छ। उपकरण चिन्तनशील विशेषताहरु संग एक 15.4 इन्च LC-प्रदर्शन र 1680 X 1050 पिक्सेल 16:10 ढाँचा को एक संकल्प संग सुसज्जित छ।
नयाँ मोडेल जब कार्यक्रम धेरै प्यानल वा Windows प्रयोग काम गर्न धेरै सजिलो छ, जो अन्य WXGA-स्क्रीन, संग तुलना एक धेरै राम्रो सिंहावलोकन छ। कारण चमक प्रदर्शन पक्कै उच्च संकल्प फोटो को खेलाडीहरूलाई र प्रशंसक कदर हुनेछ धनी र जीवंत रंग उत्पादन गर्छ।
तस्वीर एकदम स्पष्ट र तीव्र देखिन्छ, र सुरुवातमा वा रन आवेदन समयमा कुनै पनि विदेशी बैंड पूर्ण कारण एसस M50V मा म्याट्रिक्स गुणस्तर गर्न सफाया। प्रयोगकर्ता समीक्षा विशेष गरी udavshuyusya स्वचालित चमक नियन्त्रण, अब आवश्यक छ जो दुई छुवाइहरू (Fn + ए) मा अक्षम गर्न सकिन्छ उल्लेख गरे।
यसलाई तुरुन्तै प्रदर्शनमा एक घमाइलो दिन बाहिर काम गर्न धेरै उपयुक्त छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, कारण चिन्तनशील चमकदार सतह र कम चमक सीमा छ।
कोण परिवर्तन एक उच्च र व्यापक कार्य क्षेत्र छ जब दुवै तेर्सो र ठाडो छवि स्थिरता - हेर्दै कोण लागि जाँदा, यन्त्र धेरै खुसी हुनुहुन्छ। स्वाभाविक, छवि सिद्ध टाढा छ, तर दुई मित्र को कम्पनी मा एक चलचित्र हेर्नको लागि हेर्ने कोण बलियो तिरस्कार संग कुनै समस्या छ।
नयाँ वी-मोडेल, साथै यसको एस-precursors, उच्च प्रदर्शन मल्टिमिडिया उपकरणहरू को खण्ड बुझाउँछ। विशेषताहरु अन्तिम लाइन हालको एसस M50V देखि अलि फरक हो: Motherboard M50VM प्रका 2.0 RM45 प्रोसेसर कोर2जोडी T9400 "इंटेल" द्वारा 2.5 GHz को घडी आवृत्ति संग गर्न, भिडियो कार्ड nVidia बोर्ड मा स्मृति गिगाबाइट संग GF 9650M जी.टी., एक हार्ड ड्राइभमा 320 जीबी र4जीबी को राम।
उच्च-परिभाषा भिडियो, संगीत र इन्टरनेट हेर्दै कुनै पनि कार्यालय आवेदन, - को M50V लागि कुनै समस्या छैन। PCMark05 मा परीक्षण को परिणाम अनुसार, उपकरणले सहूलियत 3630 अंक मा ल्यापटप काम मूल्यांकन गर्दा, 6140 अंक को मूल्यांकन प्राप्त। , प्रणाली को औसत दक्षता विंडोज आन्तरिक परीक्षण अनुसार, माथि 5.0 अंक, - अप कार्ड मात्र (5.0) समेट्न, अन्य मापदण्डहरू 5.5 एकाइहरु भित्र थिए।
ध्वनि को एसस M50V मोड्युल Altec Lansing देखि संचालित मा, - उहाँले अघिल्लो मोडेल M50S र M70S मा राम्रो प्रदर्शन गरे। यो रूपमा राम्रो जस्तै सुनिन्छ, तर त्यहाँ जो Cram 15 इन्च मोडेल असफल भएको छ कुनै subwoofer, हो, त्यसैले कम आवृत्ति नयाँ उपकरण को मामला मा आफ्नो पुरानो समकक्षों पछि lags।
कुनै पनि मामला मा, समग्र ध्वनि एक ठोस चार मा हुन सक्छ आकलन गर्न: ध्वनि स्पष्ट र तल bogged, मात्रा पर्याप्त छ, तर कसैले बास बिना गर्न सक्छन् भने, त्यहाँ सधैं हेडफोन वा बाह्य स्पिकरहरू को रूप मा वैकल्पिक छ।
खडा-एक्लै सञ्चालन एसस M50V
4800 mAh को ब्याट्री क्षमता धेरै राम्रो ब्याट्री जीवन प्रदान गर्दछ। Rechargeable ली-आयन ब्याट्री 11.1 वी, BatteryEater पाठकहरूका द्वारा परीक्षण अनुसार, लगभग चार घण्टा पछिल्लो सक्नुहुन्छ (सेटिङ सुरक्षित अधिकतम शक्ति, न्यूनतम स्क्रिन चमक र मानार्थ इन्टरनेट मोड्युल)।
उपकरणमा पूर्ण लोड मा, ब्याट्रि 70-80 मिनेट रहन्छ र राम्रो सूचक हो (अधिकतम चमक, सम्भव छ भनेर सबै सक्षम)। ब्राउजर संग काम गर्दा उच्च-परिभाषा भिडियो ग्याजेट प्ले गर्दा झन्डै दुई घन्टा, धेरै राम्रो कुरा लामो: सक्रिय शक्ति बचत मोड र इन्टरनेट सक्षम उपकरण मोड्युल औसत चमक तीन घण्टा "बस्ने" जब।
M50V मोडेल राम्रो गुणस्तर आवास र एक अपेक्षाकृत उच्च उत्पादकत्व छ। यो सुविधाजनक स्थान र योग्य इन्टरफेस तपाईं जडान तार द्वारा र बन्दरगाह मा छडी तोडने बिना विचलित भइरहेको बिना आराम काम गर्न अनुमति दिन्छ।
विनचेस्टर कि ठूलो भन्न छैन, तर 320 जीबी आवेदन लागि सबै आवश्यक लागि पर्याप्त हुनुपर्छ, र ठाउँ अपर्याप्त छ भने, eSATA पोर्ट तपाईं बाह्य हार्ड ड्राइभ वा अन्य कुनै पनि यस्तै मध्यम जडान गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, खेल्न आधुनिक खेल काम गर्ने छैनन्, तर यो अवकाश नरम अन्तिम पुस्ता माथि रोशन गर्न सक्नुहुन्छ (2005-2012 GG।)।
M50V नोटबुक मल्टिमिडिया आवेदन को प्रशंसक अक्सर काम गर्न बिन्दु बी उत्प्रेरित बिन्दु एक देखि गर्नेहरूलाई मान्छे, साथै सिफारिश गर्न सकिन्छ। बाँकी ठूलो मात्रा र उच्च गति लागि दावी बिना कार्यालय को काम घोडा छ।
सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली संगीत केन्द्र: सबै भन्दा राम्रो मोडेल बारे सुझाव र समीक्षा
आत्म-leveling लेजर स्तर बश: समीक्षा, मूल्यहरू
नोकिया 106 स्पर्श टोन टेलिफोन को समीक्षा
कसरी फ्रिज अनुभव Housewives देखि odors सफा गर्न?
ढोका मा संयोजन ताले
इन्फ्रारेड प्रकाश को स्रोतहरु: प्रकार, आवेदन
कारण र conjunctivitis को लक्षण
Okudzhava Bulat: एक जीवनी। Bulat Okudzhava: रचनात्मकता
बच्चाको stuttering कसरी चिन्न?
उच्चतम युरोपेली गुणस्तर, लेखा सेवा समारा
निवास देश को लागि सस्ता के हो?
ग्रीस मा होटल वन पार्क होटल 3: * फोटो र समीक्षा
तपाईं लागि सही भन्ने लामो पोशाक चयन!
परिवार को प्रकार र मनोविज्ञान आफ्नो विशेषताहरु
केन्द्रीय मास्को - शून्य किलोमिटर
एलेक्स गालेचेनुक मोन्ट्रियल क्यानडीन्सको केन्द्रीय स्ट्राइकर हो। जीवनी, उपलब्धिहरू, चोटहरू
रूसी पौडीबाज Sergey Fesikov। जीवनी र खेल उपलब्धिहरू।
IPv6 - यो के हो? IPv6 कसरी सक्षम?